Ururka Saxafiyiinta Qaranka oo cambeereeyay qaraxii Beydhabo oo lagu dilay wariyeyaal – Radio Muqdisho
Ururka Saxafiyiinta Qaranka oo cambeereeyay qaraxii Beydhabo oo lagu dilay wariyeyaal
Ururka saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa cambaareeyay weerarkii ka dhacay magaalada Beydhabo ee ay ku dhinteen laba wariye qaar kalena ay ku dhaawacmeen xilli ay ku sugnaayen goob internet-ka laga isticmaalo oo ku taalla magaalada oo la isku qarxiyay.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo wariyeyaasha, waxaa geeriyooday Abdulkadir Ahmed Mayow, oo ka tirsanaa Telefishanka Somali Channel iyo Mohamed isxaq Barre oo cameraman u ahaa Kalsan TV. Sidoo kale Abdulkadir Hassan Jookar, oo ka tirsanaa Kalsan Television, Abdulkadir Hassan Iyeeyow, oo u shaqeynayay Somali SAT Television iyo Mohamed Adan Socdaal oo u soo warrama Dalsan Radio ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qofood.
“Waxaan si aad ah uga murugeysannahay inaan maqalno dhimashada saaxibadeena ku dhintay qaraxa maanta, Waana cambeereyneysaa qaraxa sida ugu adag ee macquulka ah” ayuu yiri Maxamed Ibraahim oo ah xoghayaha guud ee NUSOJ. Wuxuu sidoo kale ku baaqay in baaritaano la sameeyo si kuwa falka geystay caddaaladda loo mariyo.
Waa wariyeyaashii ugu badnaa ee hal goob ku dhinta sanadkaan, sidoo kale dhimashada labadaan wariye ayaa tirada wariyeyaasha lagu dilay sanadkaan dalka ka dhigaysa shan qof.
R.W Cabdiweli oo Cambaareeyey Qaraxii ka dhacay Magaalada Baydhabo
Dhagayso Warka Subaxnimo